Wongorora Sudio Regent: inochinjika uye iine kuzvitonga kukuru pamutengo wakadzikira | IPhone nhau
Zviripachena kuti parizvino mahedhifoni ari kutora misoro yese maAirPod, mahedhifoni matsva asina waya kubva kuApple ari kusiya kuravira kwakanaka kwazvo mumuromo. Asi maAirPods ari munzeve-mahedhifoni uye kwete tese tinofarira mahedhifoni atinofanira kuisa zvakanaka munzeve kana tikasazonakidzwa neruzha rwawo. Kuti ndive pamba, ini ndagara ndichida pamusoro-nzeve mahedhifoni nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, uye mune ino posvo isu tichataura nezve iyo Sudio Regent, vamwe Bluetooth mahedhifoni kune avo vasingade kana vanogona kuwana izvo zvimwe zvigadzirwa zvinokumbira mahedhifoni.
1 Sudio Regent bhokisi zvirimo
2 Dhizaini: diki, asi inokwezva
4 Kuzvimiririra: havazokuregerere pasi
5 Kudzora, mabhatani uye marongero
Sudio Regent bhokisi zvirimo
Ndinofanira kubvuma kuti bhokisi iro maSudio Regents anouya rakandishamisa zvachose. Kutanga nehurukuro yayo uye kupera ne kadhibhodhi rakaoma rinodzivirira zvirimo. Mukati, kana tangodhonza iyo tabo kuvhura iyo drawer, isu tinowana:
Sudio Regent mahedhifoni.
USB kune micro USB kuchaja tambo.
3.5mm kaviri jack tambo yekubatana kwemuviri.
Zvinyorwa / mirairo.
Iyo USB kune micro USB tambo inotibvumidza isu kubhadharisa mahedhifoni nguva dzese, zvinoreva kuti, kusiyana nezvinoitika nemamwe maBluetooth michina, isu tinogona kuteerera kumimhanzi panguva imwe chete yatinovatakura. Zvinogona kutaridzika sediki risingakoshi, asi ini ndakave nevamwe vamwe izvo izvi zvaisakwanisika uye zvinopa hushingi hwakawanda kumirira mahedhifoni kuti vabhadharise kuti uvashandise.
Dhizaini: diki, asi inokwezva
Ne dhizaini ini ndinofanira kubvuma kuti ini ndakasarudzika. Kana ndichifanira kutaura chokwadi Ini ndinowanzo shoropodza dhizaini yeanenge chero mahedhifoni Ndiri kuona, kunze kweBeats. Asi iro dambudziko neBeats harisi chaizvo mukugadzirwa kwaro, kana zvisiri (mumaonero angu) mune zvimwe zvese zvimwe.
Iyo Sudio Regents ine dhizaini iyo inotaridzika zvakanyanya kunge mahedhifoni atinogona kuwana mune chero studio kurekodha, nemusiyano wekuti idiki diki. Masisitimu atinozoagadziridza mumusoro medu ane musoro wakagadzika uye mahedhifoni akasungirirwa kune dzimwe waya dzinoona kukura kweiyi bhanhire. Iyo saizi inogona kukwezva kune vamwe vashandisi, asi ini ndinofunga idiki diki.
Iyo Sudio Regents inowanikwa pa nhema uye chena mavara, asi isu tine 4 dzimba dziripo, pamusoro peiyo iyo yainayo nekutadza, iyo ichatibvumidza kuti tipe iyo zvakanyanya kubata kwedu.
Sezvinobvumwa, iyi haisi iyo yakasimba poindi yeaya mahedhifoni, asi zvese zvinoenderana nei mudziyo watiri kuda kuushandisa nawo. Kana tikazvishandisa ne iPhone, chichemo changu chete ivhoriyamu, isina simba rese randaizoda kuwana. Kwandiri inodonha ipfupi, pane imwe nguva yandisingakwanise kukoshesa iwo ma nuances andingade. Kunyangwe panguva ino haifanire kunge iri chakavanzika kuti ini ndinoda Metal, kwete zvese zvandiri kunzwa ndezvekupopota zvisina musoro; Mazhinji emimhanzi yandinoteerera ndeyechizvinozvino, zvinoreva kuti kugadzirwa kwacho kwakanaka uye zvese zvinofanirwa kurira zvakanaka. Ndosaka ndichisuwa iro simba shoma shoma.
Ndirini patichanyanya kucherechedza iyo kushayikwa kwesimba kuchave patinovabatanidza ivo kune komputa kana chimwe chishandiso chine simba. PaMac yangu, vhoriyamu inoiswa nemahedhifoni, saka havagumisi kukanganisa, asi ini zvakare ndine PC ine Ubuntu kwandakambovaisa pamuedzo uye, vachisimudza vhoriyamu, vanokanganisa.
Sudio Regents vane Kuchenesa Ruzha, chimwe chinhu icho, kana ukangochizama, hauchakwanise kurarama pasina icho.
Kuzvimiririra: havazokuregerere pasi
Zvichida chakanakisa chinhu pamusoro peaya mahedhifoni. Zvekuti havana simba rinogona kuparadza nzeve dzedu zvakare zvine zvinhu zvaro zvakanaka, kutanga nekuti isu hatizovakanganisa. Kune rimwe divi, isu tinogona zvakare kuteerera kumimhanzi kwenguva refu, kusvika maawa matanhatu ekushandisa anovimbisa Sudio. Kana ndichifanira kuva akatendeseka, handizive kana ichi chiri chokwadi kana kwete nekuti ndave ndichichishandisa kwemazuva uye kubva pandakachiita chakazara, ndichine 50% bhatiri rakasara. Icho chinhu chinokosheswa, kuti isu hatifanire kunge tichiziva nezve kuzviisa nguva dzese.
Kudzora, mabhatani uye marongero
Iyo Sudio Regents iri akapusa mahedhifoni uye izvo zvinoonekwa kana uchidzora kana kuzvibatanidza kune chero mhando yechigadzirwa. Parudyi renzeve ine mabhatani matatu:
Wedzera vhoriyamu uye nekumberi rwiyo kana tikarichengeta.
Dzikisa vhoriyamu uye kunonoka rwiyo kana tikarichengeta.
Bhatani repakati ndere batidza / bvisa mahedhifoni kuimanikidza kwemasekondi matatu kusvikira mwenje mutsvuku wapenya, tanga kubatana kweBluetooth tikazvimanikidza kwemasekonzi mashanu kusvikira taona mwenje webhuruu uye daidza Siri kuimanikidza kaviri. Ramba uchifunga kuti kukumbira Siri zvichave zvakafanira kuti iwanikwe; Hatizokwanise kuikumbira kana, seni, tisina iyo inoshanda pane yekuvharira sikirini, mune iyo kesi tichafanira kuvhura iyo iPhone kuti tikwanise kukumbira Siri.
Kubatanidza mahedhifoni kune chero chishandiso kuri nyore senge tinya repakati bhatani ka5, enda kune chikamu cheBluetooth chechigadzirwa chatiri kuda kuchisanganisa uye tichisarudza kubva ipapo. Hapana chimwe chekuita. Panyaya yeiyo iPhone, isu tinodzora vhoriyamu yayo pamwe nemativi mabhatani.
Ini pachangu, ndinofanira kubvuma kuti mahedhifoni aya akasiya moyo wangu wapatsanurwa. Kune rimwe divi, isu tinogona kutaura kuti tiri kubata nePlag & Play chishandiso, ndokuti, kushandiswa kwayo kuri nyore Uye, semidziyo yeApple, vanoshanda kunze kwebhokisi. Vanopawo kuzvitonga kwakanaka kwazvo uye izvi zvinondibvumidza kuteerera mimhanzi pese pandinoida, chimwe chinhu chandisingakwanise nemamwe mahedhifoni. Asi kune rimwe divi tine ruzha rwusina poindi yemagetsi Uye, iyi inofungidzira maonero, zvishoma pakadzika.
Asi isu tinofanirwa kukoshesa zvese uye mutengo weSudio Regents wakanyanya kuderera kune, semuenzaniso, iyo AirPods. Munguva yekisimusi iyi tinogona kuzvitenga ne € 129 kubva yavo webhusaiti, izvo zvisingasviki pasi pe50 euros kupfuura mahedhifoni matsva e-nzeve, zvakakosha izvi, kubva kuApple. Iyo zvakare yakaderedzwa kanenge katatu zvakapetwa pane mamwe akakurumbira brand brand mahedhifoni eBluetooth ayo, ngatitaurei nawo, haape irinani ruzha rwakanyanya Chii chimwe, Tichishandisa yekushambadzira kodhi ACTUALIDADIPHONE isu tinowana iyo 15% dhisikaundi, saka izvozvi tinogona kutenga mahedhifoni kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti ye € 109,65. Mukupedzisira, munhu wese anofanirwa kuyera zvayakanakira nezvayakaipira uye osarudza (asi ini handidi vamwe vane marangi anotanga neB).
Ivo havazvinetse mushure memaawa akati wandei ekushandisa
Diki uye yakapetwa saizi
Rira zvishoma zvishoma
Kukura kwayo kudiki kunogona kuve dambudziko kusvikira wajaira
Zvinotenderwa chiteshi che USB chekuchaja
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Wongorora Sudio Regent: anowirirana mahedhifoni ane kuzvitonga kukuru pamutengo wakadzikira